မယ်သီလများ အမွေရခွင့် ရှိပါသလား ??
### Zawgyi Version ### ''ကျွန်တော် အိမ်ဝယ်လိုက်တယ် ဆရာ။ ကန့်ကွက်သူပေါ်လာလို့ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာ သိချင်လို့ ပါ''ဟု စာဖတ်သူ ပရိသတ်တစ်ဦးက စာရေးသူထံ လာရောက် ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ''ဒါကတော့ မကြာခဏ တွေ့ကြုံလေ့ရှိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ အကြောင်းအရင်းသိဖို့တော့ လိုတယ်။...
### Zawgyi Version ### ကွန်ကရစ် ကောင်းကောင်းရရှိနိုင်ရန် ရောသည့် ပစ္စည်းများကို အချိုးမှန်ရောစပ်ရသည်။ လောလောလတ်လတ် ရောစပ်ထားသော ကွန်ကရစ်မှာ သွန်းပုံ (mould) ထဲသို့ လွယ်ကူစွာ လောင်းနိုင်သည်။ လောလောလတ်လတ် ရောထားသော ကွန်ကရစ်၏ ဂုဏ်သတ္တိကို လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း (workability) ဟု...
အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (GP) ဆိုတာဘာလဲ။ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (SP) ဆိုတာဘာလဲ။ GP, SP နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေသတိထားဖို့ လိုအပ်မလဲ ?...
### Zawgyi Version ### အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ GP ( General Power ) အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးမှ အခြားလူတစ်ဦးသို့ ၎င်းပိုင်ဆိုင်သော မရွှေ့ မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းနှင့် အရပ်ရပ်ကိစ္စအားလုံးအတွက် ၎င်းကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ဘိသကဲ့သို့...
လယ်ယာမြေမှ ကျေးရွာမြေငှားဂရန် လျှောက်ထားလို့ရသလား။ မည်သို့လျှောက်ထားမလဲ။ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ ?...
### Zawgyi Version ### ကျေးရွာမြေငှားဂရန်လျှောက်ထားခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီး အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက်များ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါသည်။ (က) လျှောက်ထားသူအမည်၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့်...
သေတမ်းစာကိုဥပဒေအရတရားဝင်အောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရပါသလဲ ?
### Zawgyi Version ### ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့် သေတမ်းစာရေးခွင့်မရှိပါ။ ခရစ်ယာန် ၊ ဟိန္ဒူနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အနေဖြင့် သေတမ်းစာရေးခွင့်ရှိပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့် မိဘများသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်သားသမီးများဖြစ်ကြသည့် အမွေစားအမွေခံများအားလုံး၏...
တစ်နာရီ ၉ ဒေါ်လာသာရသည့် ပန်းစိုက်အလုပ်သမားဘဝ၊ တံခါးစောင့်အလုပ်သမားဘဝ၊ သူငယ်ချင်းတစ်ဦး၏ နေအိမ်နောက်ဘက် ကားနောက်တွဲတစ်ခုကို တစ်ပတ်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြင့် ငှားရမ်းနေထိုင်ရသည့်ဘဝမှ Rich Dad Poor Dad စာအုပ်ဖတ်ရှုပြီးနောက် အသက် ၃၀ မတိုင်မီ အိမ်ခြံမြေများ ဝယ...
### Zawgyi Version ### ဆာရှာ ဟော့ပ်ကင်းစ်သည် သြစတေးလျနိုင်ငံ၊ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ကွင်းစလန်ပြည်နယ်မှ ကျောင်းထွက်လိုက်ရချိန်တွင် မိဘနှစ်ပါးကလည်း ကွာရှင်းပြတ်စဲလိုက်ကြချိန်ဖြစ်ကာ ကံကြမ္မာဆိုးများ စုပြုံရင်ဆိုင်နေရချိန် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့...
ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာမတူသူ မွေးစားသားသမီးထံမှ အိမ်နှင့်မြေကို ၀ယ်မည်ဆိုလျှင်
### Zawgyi Version ### ရုံးခန်းသို့ စာရေးသူ ရောက်သည့်အခါ အမျိုးသားတစ်ဦးထိုင်နေသည်ကို ကျောဘက်မှ မြင်တွေ့လိုက်ရသည်။ ခြေသံကြားသဖြင့် ထိုသူသည် စာရေးသူကို လှည့်ကြည့်ပြီး ရပ်လိုက်သည်။ ''ဦးလေး ကျွန်တော် စိုးပိုင်ပါ'' ဟု အရိုအသေပြုလျက်...
ပေးကာပေး၏ တကယ်မရသည့် အိမ်ခြံမြေ
### Zawgyi Version ### ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများဟာ တစ်ဖက်သားကိုအလွန်အားနာတတ်သော စိတ်လွန်ကဲကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တစ်ဖက်သားကအခက်အခဲရှိ၍ အကူအညီတောင်းလာလျှင်လည်း အစွမ်းကုန်ကူညီတတ်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။...
အိမ်ခြံမြေအရောင်းထက် အငှါးသွက် ၊ အငှါးထက် အပေါင်သွက် ရှင်းရတာခပ်ခက်ခက်
### Zawgyi Version ### ယခုတလော အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်များလာတာ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များလည် အလုပ်ရှုပ်နေကြပါတယ်။ အချို့ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တွေကလည်း ဒီကနေ ဘယ်မြို့နယ် ၊ ဘယ်မြေကွက်ကို တန်ဖိုးဘယ်လောက်နဲ့အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်း...
လယ်ယာမြေမှ စက်မှုမြေငှားဂရန် လျှောက်ထားလျှင် မည်သို့ လျှောက်ထားမလဲ။ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ?
### Zawgyi Version ### လယ်ယာမြေကို ရှေးဦးစွာ လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံ(၇)လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီး ပုံစံ(၇)ရရှိပြီးပါက လယ်ယာမြေအား အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့် လ/ယ ၃၀ လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားနည်းသုံးစွဲခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေရာတွင်...